Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း)
Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cinnarizine ကို အဓိကအားဖြင့်
•	နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ပြနာများ
•	ကားစီးလျှင်မူးခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းများ
•	မူးဝေခြင်းပြဿနာများ မှာသုံးတတ်ပါတယ်။
Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
•	ပါဝင်သောအညွှန်းကိုသေချာဖတ်ပြီမှ သောက်ပါ။ အညွှန်းမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပါအဝင် ဆေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အချက်အလက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်
•	ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူ ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းသောက်ပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
•	ဆေးသောက်နေစဉ် အရက်လုံးဝမသောက်ပါနဲ့
•	ခရီသွားလျှင် မူးဝေသည့်ပြဿနာများအတွက်သောက်ပါက ခရီးမသွားမီ ၂ နာရီအလိုမှာ ပထမတစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ ခရီးရှည်ရင် ၈ နာရီတစ်ခါ လိုအပ်ပါကသောက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေကိုတိုက်ပါက အသက်နဲ့ကိုက်သော ပမာဏဟုတ်မဟုတ် သေချာစိစစ်ပါ၊ တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်ကြား ၈ နာရီခြားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးတွေကိုအိမ်သာထဲ သွန်ပစ်ခြင်းမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ရက်လွန်သွားလျှင်လည်း သေချာစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမလဲ ဆေးရောင်းသူကိုမေးနိုင်ပါတယ်။
Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
•	Cinnarizine နဲ့ဆေးမတည့်ခြင်းရှိပါက
•	ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း ပြဿနာများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
fructose or galactose မထိန်းနိုင်သောရောဂါ၊ Lapp lactase လိုအပ်သောရောဂါ၊ sucrase-isomaltase စုတ်ယူမှုအားနည်းသောရောဂါ၊ sucrase-isomaltase မလုံလောက်သောရောဂါ များကဲ့သို့ ရှားပါးမျိုးရိုးလိုက်အခြေအနေများရှိပါက ဆေးမသောက်သင့်ပါဘူး။ Cinnarizine မှာ lactose and sucrose တို့ပါလို့ပါ။
မိန်းမောပြီး အာရုံစိုက်ရခက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အရက်နှင့် အခြားအာရုံကြောဆေးတချို့သောက်ပါက ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ပြီးလျှင် ယာဉ်မောင်းခြင်းကဲ့သို့ အာရုံစိုက်ရသောအလုပ်မျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင်အခုသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲစေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေတာမျိုး ဖြစ်စေကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- barbiturates, hypnotics, narcotic analgesics, tricyclic antidepressants, sedatives and tranquillisers, Monoamine-oxidase inhibitors.
ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက် ခုသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပေးသူကိုပြောပြရပါမယ်။ ဘေးကင်းဖို့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ပြချက်မရှိဘဲ ဆေးတွေရပ်လိုက်တာ၊ ပြောင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cinnarizine ဟာ အစားအစာတချို့၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်တို့နဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ပြီး ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းစေတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုများစေတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးစမသောက်ခင် ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
•	အတွင်းနားနှင့် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ
လူလတ်ပိုင်း, သက်ကြီးပိုင်းနှင့် ၁၂ နှစ်အထက် ကလေးများမှာ: ဆေးနှစ်လုံးကို တစ်နေ့လျှင် သုံးကြိမ်။
•	သက်လတ်ပိုင်း, သက်ကြီးပိုင်းနှင့် ၁၂ နှစ်အထက် ကလေးများမှာ : ခရီးမသွားခင် ၂ နာရီအတွင်း ဆေး၂ လုံးနှင့် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ၈ နာရီကြားတစ်ကြိမ် ဆေးတစ်လုံး သောက်ပေးရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
•	အတွင်းနားနှင့် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
၅ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များ : လူကြီး ဆေးပမာဏ၏ တစ်ဝက်။
•	ခရီးသွားလျှင် မူးခြင်း
၅ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များ : လူကြီးဆေးပမာဏ၏ တစ်ဝက်။
Cinnarizine (စင်နာရီဇင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား ၁၅ mg, ၂၅ mg, ၇၅ mg
Stugeron http://home.intekom.com/pharm/janssen/stugeron.html Accessed October 03, 2016
Cinnarizine 15mg tablets. https://www.drugs.com/uk/cinnarizine-15mg-tablets-leaflet.html Accessed October 03, 2016
Drug “cinnarizine” price list http://www.medindia.net/drug-price/cinnarizine.htm
Accessed October 03, 2016
သင့်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့လက္ခဏာတွေအားလုံး ရှိနေပေမယ့် တကယ်တမ်း ကိုယ်ဝန်ရှိတာမဟုတ်တဲ့အဖြစ်တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်